stealth - Synonyms of stealth | Antonyms of stealth | Definition of stealth | Example of stealth | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for stealth
Top 30 analogous words or synonyms for stealth
အက်ဖ်-၁၁၇ နိုက်ဟော့ခ် လော့ခ်ဟိ စကန့်ခ် ဝေါ့ခ် (Lockheed Skunk Works) မှ ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ထိုလေယာဉ်သည် ရေဒါမြင်ကွင်းမှ ဖမ်းမိရန် ခက်ခဲသော ရေဒါလှိုင်း ပုံရိပ်လျော့ နည်းပညာ (stealth technology) ကို ပထမဆုံး အသုံးပြု တီထွင် ထားသော လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ F117-A ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ် ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲ အတွင်း အသုံးပြုခဲ့ခြင်းကို လူသိများ ထင်ရှားသည်။ မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်ဖြစ်သော်လည်း အများစုက ခေါ်ဝေါ်ကြသော အမည်မှာ Stealth Fighter ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
တိုင်ဖွန်း Probably the best-known fictional Typhoon-class submarine was the stealth equipped "Red October", the subject of the Tom Clancy novel "The Hunt for Red October" and its 1990 movie adaptation, starring Sean Connery as the fictional Captain Marko Ramius.
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် By 1976 these programs progressed to wherealong-range strategic stealth bomber appeared viable. Whereas the B-1 relied on flying around known defense sites and could only change its mission withinalimited selection of pre-determined routes,astealth bomber could fly over the Soviet Union undetected, allowing it to linger and hunt for targets rather than repeatedly entering and leaving the target zone as quickly as possible. Inanuclear exchange, this strategy permits the aircraft to wait out the initial attacks and find targets that escaped destruction by eliminating the "overkill" that was built into existing war planning. Also, stealth characteristics negated prior requirements for high speed dash capabilities and extensive electronic warfare suites for protection.
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် The B-2's low-observable, or "stealth", characteristics enable the safe penetration of sophisticated anti-aircraft defenses and to attack even heavily defended targets. This stealth comes fromacombination of reduced acoustic, infrared, visual and radar signatures to evade the various detection systems that could be used to detect and be used to direct attacks against an aircraft. The majority of the B-2 is made out ofacarbon-graphite composite material that is stronger than steel and lighter than aluminium, perhaps most crucially it also absorbsasignificant amount of radar energy. Reportedly, the B-2 Spirit hasaradar signature of about 0.1 m.
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် It was reported in 2011 that the Pentagon was evaluating an unmanned stealth bomber, characterized asa"mini-B-2", asapotential replacement in the near future. In 2012, Air Force Chief of Staff General Norton Schwartz stated the B-2's 1980s-era stealth would make it less survivable in future contested airspaces, so the USAF is to proceed with the Next-Generation Bomber despite overall budget cuts. The Next-Generation Bomber was estimated, in 2012, to have an projected overall cost of $55 billion.
အက်ဖ်-၂၂ ရက်ပ်တာ လော့ခ်ဟိမာတင်/ဘိုးအင်း အက်ဖ်-၂၂ ရက်ပ်တာသည် လူတစ်ယောက်စီး အင်ဂျင် ၂လုံးတပ် ပဉ္စမမျိုးဆက် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော (supermaneuverable) တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီးကို ရေဒါမြင်ကွင်းမှ ဖမ်းမိရန် ခက်ခဲသော ရေဒါလှိုင်း ပုံရိပ်လျော့ နည်းပညာ (stealth technology) ကို အသုံးပြုထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် လေကြောင်း စိုးမိုးရေး တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေး ၊ အီလက်ထရောနစ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် ရှာဖွေထောက်လှမ်းရေး တာဝန်များကိုလည်း ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။ လော့ခ်ဟိမာတင် အေရိုနော့တစ်သည် အဓိက ကန်ထရိုက်တာဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ဖရိမ် အစိတ်အပိုင်း အမြောက်အများ၊ လက်နက် စနစ်များ နှင့် အက်ဖ်-၂၂ ကို အပြီးသတ် တပ်ဆင်ခြင်းတို့ အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် ပါတနာ ဖြစ်သော ဘိုးအင်း ကာကွယ်ရေး၊ အာကာသနှင့် လုံခြုံရေးကမူ အတောင်ပံများ၊ ကိုယ်ထည်နောက်ပိုင်း၊ အေဗီရွန်းနစ် တပ်ဆင်မှု နှင့် ပိုင်းလော့နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး သင်တန်းပေးခြင်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည်။